प्रियंका कार्की • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
प्रियंका कार्की नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक चर्चित मोडल तथा अभिनेत्री हुन् । नेपाली युवा पुस्ताले प्रियंका कार्कीलाई सेक्स सिम्बोलका रुपमा लिन्छन् । प्रियंका कार्कीको फिगर नै यस्तो छ कि, कामुकताको सबै अंग पुगेको छ । एकपटक ‘डाइनिङ टेबुलमा सेक्स गर्दा मज्जा आउँछ’ भन्ने उनको अन्तर्वार्ता निकै चर्चित र विवादास्पद पनि बनेको थियो । नेपाली चलचित्र ‘थ्री लभर्स’ बाट दर्शकसामु आएकी नायिका कार्कीले ५÷६ बर्षको उमेरदेखि नै कलाकारिताको क्षेत्र रोजेकी थिइन् ।
नामः प्रियंका कार्की
उमेरः २८ वर्ष
तौलः ५५ केजी
उचाइः ५ फिट ७ इञ्च
उनले ९ वर्षको उमेरमा नेपाली चलचित्र महादेवीमा बाल कलाकारको भुमिका निभाएकी थिइन् । नायिका कार्कीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा २ वर्षजति भिजेको काम पनि गरिन् । सन् २००५ मा ‘मिस टिन’ नेपालको उपाधि जितेपछि नायिका कार्कीको चर्चा बढ्दै गयो । अहिले उनी नेपाली सिने क्षेत्रकी चर्चित नायिकाको रुपमा चर्चित छिन् । सेक्सी लुक र आकर्षक नृत्यका कारण प्रियंका कार्कीको चर्चा बढेको छ । पछिल्लो समय ‘म स्वतन्त्र छु’ भन्ने म्युजिक भिडियोमा बोल्ड दृश्य र स्वर दिएको कारण निकै चर्चामा छिन् । नायिका कार्कीले आफ्नो स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि चाँहि कतिको समय खर्चिन्छिन् रु तिनै नायिकाको सुन्दरताको रहस्यबारे चर्चा गरिएको छ ।
योगा र खानपान
नियमित शारीरिक व्यायामले शरीर स्वस्थ रहेको नायिका कार्की बताउँछिन् । ‘स्वस्थ र स्मार्ट देखिन सकेसम्म म धेरै पानी पिउने गर्छु । व्यायाम अनिवार्य गर्दछु । कलाकारले मात्र शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले पनि शारीरिक व्यायाम गर्न भूल्नहुन्न ।’—उनले भनिन्—‘ बेलैमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सबैले सचेत रहनुपर्दछ । बिहान उठ्ने बित्तिकै जिम गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ । नायिका कार्कीले भनिन्—‘जतिसुकै व्यस्त रहेपनि म फिट हुनकै लागि दिनमा एकपटक टंगालस्थित जिम सेन्टरमा जाने गरेकी छु ।’ उनी प्राय बिहानको समयमा जिम जाने गर्छिन् । नायिका कार्की भन्छिन्—‘त्यसले मलाइ हरेक दिनको काममा सक्रिय हुन सहयोग गरेको छ ।’
नायिका कार्की व्यायाम गर्दा रमाइलो लाग्ने खालका शारीरिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गर्छिन् । उनी भन्छिन्—‘टे«डमिल धेरै गर्दिनँ किनभने त्यसले पछि घुँडामा असर गर्लाकी भन्ने डर लाग्छ ।’ उनलाई धेरै जुम्बा डान्स मन पर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था पहिचान गर्न वर्षमा एकपटक शारीरिक जाँच गर्ने गरेको नायिका कार्कीले बताइन् ।
‘शारीरिक व्यायाम गर्न अल्छी गर्न हुँदैन । मोटो ब्यक्तिले पनि शारीरिक व्यायाम गरेर मेन्टेन गर्न सकिने रहेछ ।’— नायिका कार्कीले भनिन्— बेला बेलामा मेरो पनि शारीरिक तौल बढ्ने भएकाले ब्यायाम गरेर यसलाई मेन्टेन गर्न सफल भएकी छु ।’ उनको सुझाब छ—‘उमेर बढ्दै जाँदा छाला चाउरी परेर बुढो भएको भनेर चिन्ता लिन भन्दा समयमा खानपिन र व्यायाममा ध्यान दिन उत्तम हुन्छ ।’
उनी भन्छिन्—‘कलाकारितामा लागेपछि दिनभरि कहाँ पुगिन्छ ठेगान हुँदैन । त्यसैले घरमा राम्ररी खाना खाएपछि दिनभर के खाने भन्ने तनाव हुँदैन ।’ बाहिरको दुषित खानपानले स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । तालिका बनाएर खाना खाना खाने गरेको उनले बताइन् । नायिका कार्कीको प्रायः बिहानको खाना हेवी हुने भएकाले उनी प्रायः दिउँसो खान खाँदिनन् । तर बेलुका भने सुप अनिवार्य खाने गर्छिन् ।
दिउँसो प्रायःफलफूल र जुस ।
बेलुका अनिवार्य सुप
नकारात्मक सोच नलिने नायिका कार्की नकारात्मक सोच राख्न नहुने मान्यता राख्छिन् । उनी भन्छिन्—‘नकारात्मक सोचका कारण मानिस बिरामी पर्न सक्छ ।’ कोही पनि चिन्ता र तनावबाट मुक्त हुन सक्दैन । तनावले काममा असर पुर्याउँछ । त्यसैले सँधै फ्रेस हुने विधिहरु अपनाउने गरेको उनले बताइन् ।
नेपाली मोडल नै यति स्टाइलीस देखिएपछि इन्स्टाग्राममा हिट हट भइन् अदिति (फोटो फिचर)
हटकेक नम्रता सापकोटाका १० उफ् तस्विर…
इशा गुप्ताका हट यी ८ पोज जसले विश्व फिल्म नगरीमा आगो सल्कायो !